Solutions to Backpain | Wienmandu
Solutions to Backpain
उठ्नु न बस्नु बनाउँछ ढाडको दुखाइले
२५ देखि ५० प्रतिशत मानिस ढाड दुख्ने समस्याबाट पीडित छन्　। गाउँघरमा गहौँ भारी बोक्नेलाई मात्र होइन, सहर-बजारमा कम्प्युटरमा काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने मानिस पनि ढाड दुख्ने समस्याबाट प्रभावित छन् ।
दुई वर्षदेखिको ढाड दुख्ने समस्याले थलिएका प्युठानका इन्द्रप्रसाद घिमिले निराश बनिसकेका थिए　। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधोपचार पनि गरे धामी-झाँक्रीलाई पनि देखाए, तर उनको समस्या २० को १९ भएन　। ढाडको दुखाइबाट सुरु भएको उनको समस्या खुट्टामा पनि सर्न लाग्यो　। उठेर हिँड्डुल गर्न खोज्दा तातो सुइरोले उनको खुट्टामा घोचेजस्तो हुने र झमझमाउने गरेको उनले सुनाए ‘उठेर हिँड्डुल गर्न नसक्ने मात्रै होइन, ओल्टो-कोल्टो गर्दा पनि दुख्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको डाक्टरलाई देखाएपछि नसा च्यापिएको थाहा भयो अप्रेसन नै गर्नुपर्‍यो　।’ उनलाई अहिले निको भएको छ　। घिमिरेलाई मात्र होइन, ढाड दुख्ने समस्याबाट धेरै मानिस पीडित रहेको चिकित्सक बताउँछन्　।
नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत न्युरो सर्जन डा. प्रबिन श्रेष्ठका अनुसार युवादेखि वृद्धवृद्धा गरी २५ देखि ५० प्रतिशत मानिस ढाड दुख्ने समस्याबाट पीडित छन्　। गाउँ-घरमा गह्राँै भारी बोक्ने मानिसलाई मात्र होइन, सहर बजारमा कम्प्युटरमा काम गर्ने बंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने मानिस पनि ढाड दुख्ने समस्याबाट प्रभावित रहेको उनले जानकारी दिए　। तर, ढाड दुख्ने समस्या एउटै कारणले नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे　।
एउटा कारण ढाडको हड्डी र मसल्स कमजोर भएर दुख्छ, दोस्रो मेरुदण्डको नसा च्यापिएर ढाड दुख्ने उनले सुनाए　। ढाडको
समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीमध्ये मांसपेशी र हड्डीको कमजोरीले बढी आउने गरेको चिकित्सक बताउँछन्　। तर, नसा च्यापिएका कारण ढाड दुख्ने समस्या हुनेहरू पनि उत्तिकै रहेको उनले जानकारी दिए　।
सहरका आधुनिक मानिसहरू घन्टौँसम्म कुर्सीमा बसेर काम गर्छन्　। कम्प्युटरमा काम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नेहरू घन्टौँसम्म एउटै आशनमा बसेर काम गर्ने गर्छन्　। त्यसले गर्दा ढाडको मांसपेशी कमजोर हुन्छ र ढाड दुख्ने समस्या आउँछ　। एउटै पोजिसनमा काम गर्नेले पनि घन्टौँसम्म
बसिरहनुहुन्न　। ‘म त्यस्ता मानिसलाई आफ्नै उदाहरण दिएर सम्झाउने गर्छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘म पनि कुर्सीमा बसेर काम गर्छु, तर म १५ मिनेटमा एकपटक उठ्छु र दुई/तीन मिनेट उठेकै हुन्छु, तपाइर्ं पनि त्यही गर्नूस् भनेर सम्झाउँछु　।’
गाउँ-घरका मानिस टाउकोमा भारी बोक्छन्, जसको भार ढाडमा पर्छ　। त्यसले गर्दा मांसपेशी कमजोर हुन्छ र दुख्न थाल्छ　। ढाड दुख्यो भनेर सहरका मानिस बेल्ट कस्छन्　। गाउँकाले पटुका कस्ने गर्छन्　। मांसपेशी कमजोर भएर ढाड दुखेको छ भने दुई/चार दिन आराम गरेपछि निको हुन्छ　। मसल्स कमजोर हुन थालेपछि मसल्स कडा हुँदै जान्छ　। मसल्स जति कडा हुन्छ, त्यत्ति नै दुख्छ　। ‘त्यसबाट छुट्कारा पाउन आराम गर्नुपर्छ दुई/तीन दिन मजाले आराम गरियो भने बिस्तारै मसल्स खुकुलो हुँदै आउँछ,’ उनले भने　।
त्यस्तै, शरीरको तौलको कारण पनि ढाड दुख्छ　। शरीरको तौल बढी हुनेहरूमा यो समस्या बढी हुन्छ　। विशेषतः एक/दुईवटा बच्चा जन्माएका महिलामा यो समस्या धेरै छ　। ढाड शरीरको मेरुदण्ड हो　। उमेर बढ्दै जाँदा मेरुदण्डको हड्डी खिइन थाल्छ, कमजोर हुन्छ　। बढ्दो भार कमजोर हड्डीले धान्न सक्दैन　। त्यसैले तौल कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ　।
नसाका कारण हुने ढाडको दुखाइ दुई/तीन खालको हुन्छ　। एकथरी ढाड मात्रै दुख्छ　। अर्को ढाडसँगै खुट्टा पनि दुख्छ　। नसा च्यापिएको हो, नसामा खराबी छ भने दुखाइ ढाडमा मात्र सीमित नभएर शरीरको अन्यत्र पनि सर्छ　। कम्मरतिर हो भने खुट्टातिर सर्छ माथितिर भए हाततिर सर्छ　। त्यस्तोमा हात-खुट्टा दुख्ने र झमझमाउने पनि गर्छ　। नसा च्यापिएर ढाडसँगै हातखुट्टा पनि दुख्ने समस्या अझ बढी छ　। अर्को ढाडमा नसाको ट्युमर पलाएर वा नसामा चोट लागेर पनि ढाड मात्रै दुखिरहेको हुन सक्छ　। ढाडको दुखाइबाट पीडितमध्ये २२ प्रतिशतमा दुखाइ खप्नै नसक्ने खालको हुने अध्ययनले देखाएको छ　।
नसा च्यापिएर ढाड दुखेको छ भने पनि सुरुको अवस्थामा त्यत्ति खतरापूर्ण हुँदैन　। तर, केही गर्दा पनि भएन भने शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ　। तर, शल्यक्रिया अन्तिम उपायका रूपमा गरिन्छ　। सुरुमा त आराम नै गर्नुपर्छ　। औषधि सेवन गर्ने, तेस्रो फिजियोथेरापीबाट पनि कम गरिन्छ　। शारीरिक अभ्यासबाट पनि समस्या कम हुने चिकित्सक बताउँछन्　।
ढाडको नसा मुख्यतः उमेरका कारण च्यापिन्छ　। ४० वर्षबाट माथि लागेपछि हड्डी खिइन थाल्छ　। हड्डीभित्र नसा हुन्छ　। हड्डी खिइन थालेपछि नसा बस्ने प्वाल साँघुरो हुन थाल्छ　। उमेर बढ्दै गएपछि हड्डी निरन्तर खिइने हुँदा नसा च्यापिन्छ　। स्वतन्त्र रूपमा बस्नुपर्ने नसा च्यापिएपछि ढाड दुख्ने खुट्टा र हात पनि नचल्ने हुन थाल्छ　। कहिलेकाहीँ अति दुख्छ　। यतिसम्म कि सुत्न/उठ्न पनि नसक्ने हुन्छ　। ‘सुत्यो भने सुतेको सुत्यै, ओल्टो-कोल्टो फेर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तोमा तत्काल एमआरआई गरिन्छ, खराबी देखियो भने अप्रेसन गरिहाल्छौँ　।’ केही गर्दा पनि भएन र समस्या बढ्दै गए थप परीक्षणको आवश्यकता हुन्छ　। नसा च्यापिएर असर नै गरेको छ भने अन्तिममा शल्यक्रिया गर्नुपर्छ　। गाउँघरतिर बस्ने र शारीरिक काम गर्नेमा ढाड दुखे गह्रौँ भारी बोक्न छाडेर आराम गर्नुपर्छ तीन/चार दिनमा निको भइहाल्छ　। ठूलो भारी नबोक्ने, निहुरेर भारी नबोक्ने　। सम्भव भए साधारण औषधि खाने　। विस्तारै कम हुँदै गयो खुट्टामा सरेन भने त्यो मसल्सको कमजोरीले गर्दा दुख्यो भनेर बुझ्नुपर्छ　। एक सातापछि ठीक हुन्छ　। अति नै दुख्यो, दुखाइ खुट्टा र हातमा पनि सर्न लाग्यो भने चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुपर्छ　।
तत्काल चिकित्सकलाई देखाउन नसके पनि नआत्तिनुहोस् ठूलै असर भने गर्दैन　। उमेरअनुसार हड्डी खिएकोलाई उपचार गरेर पनि कम हुँदैन　। उमेरअनुसार सबैको हड्डी खिइन्छ　। कसैको अलि बढी खिइन्छ कसैको कम　। समस्या बढी भए त्यहीअनुसार उपचार गर्नुपर्छ　।
फिजियोथेरापीले पनि मसल्स कमजोर भएर हुने ढाडको दुखाइलाई कम गर्छ। चिकित्सकले पनि बिरामीलाई मालिसको तरिका सिकाएर पठाउने गर्छन्　। तर, डाक्टरले सिकाएअनुसार मालिस गर्नुपर्ने चिकित्सक श्रेष्ठको भनाइ छ।
(नयाँ पत्रिकाको अनलाइन भर्जनबाट साभार टिपिएको)
~ by wienmandu on May 15, 2010.
Posted in Educational, Medicine
One Response to “Solutions to Backpain”
I have the problem of back pain…k garnu parla mero soldier side ek dam duk6 basna pani garo hun6.
BIPIN said this on	January 25, 2011 at 10:04 am | Reply